Oppo F11 Pro Avengers Edition, fanontana voafetra ho an'ireo mpankafy ny sarimihetsika | Androidsis
Ny Avengers dia efa manana ny telefaoniny manokana, ary miaraka amin'ny Oppo F11 Pro Avengers Edition
Ilay horonantsary superhero mahery indrindra, lehibe indrindra ary be epic dia efa hiditra amin'ny sinema manerana an'izao tontolo izao ary talohan'ny nitrangan'izany dia nanambara i Oppo fa fanontana voafetra an'ny F11 Pro miaraka amin'ny sary famantarana mahazatra an'ity. Sarimihetsika inona no resahintsika? Eny, avy amin'ny The Avengers: Endgame ', mazava ho azy!
Ny fitaovana dia mitazona ny endriny sy ny mombamomba azy tany am-boalohany, fa ny zava-misy miaraka amin'ny lohahevitry ny The Avengers dia ho ampy hahasarika ny sain'ny mpanjifa mihoatra ny iray izay tsy nanandrana akory ny marika, mba hananana ny finday ho toy ny Infinity Gauntlet miaraka aminy vatosoa tafiditra ao.
1 Oppo F11 Pro Avengers Edition, ilay finday hiady amin'i Thanos
1.1 Famaritana sy fiasa
Oppo F11 Pro Avengers Edition, ilay finday hiady amin'i Thanos
Oppo F11 Pro Avengers Edition boaty atiny
Ny fanombohana ny finday mpamaly faty dia avy amin'ny fikambanana nataon'ny orinasa sinoa niaraka tamin'ny Marvel Studios. Ny telefaona dia ampahany amin'ny fampiroboroboana izay ataon'ny orinasan-tsarimihetsika hampiroborobo ny fahalianana amin'ilay sarimihetsika.
Amin'izao fotoana izao Ny Oppo F11 Pro Avengers Edition dia misy amin'ny fomba ofisialy any Malezia alohan'ny fanafarana mialoha. Na izany aza, hamely tsena hafa ihany koa izy tsy ho ela, toa an'i India, izay hipetrahany ho Thor, the God of Thunder, amin'ny 26 aprily, rahampitso. Any no hividianana azy amin'ny alàlan'ny Amazon.in.
Manaraka ny lamin'ny logo Avengers, ny finday dia misy loko manga sy famaranana manjelanjelatra. Izy io dia misy ny effets gradient sonia asiana miaraka amina modely hexagonal be pitsiny sy ny sary mihetsika mena.
Izy io koa dia miaraka a Kitapo pensilihazo nentanim-panahy amerikana manao ny ampinga mampiavaka azy, ho fiarovana sy faharetana fanampiny. Ity kojakoja any aoriana ity dia azo ampiasaina ho mpitazona ny telefaona, na hitazona izany na apetraka eo ambony mitsivalana mba hijerena horonantsary na hivezivezy mora kokoa.
Mba hanomezana cachet bebe kokoa ny olana, ny boaty misy ny fanontana manokana an'ilay fitaovana dia misy ny sary famantarana mahazatra Avengers vita pirinty hafanana ary nasiana tombo-kase ny fanangonan'ny mpanangona.
Farany, ny terminal tonga miaraka amin'ny fitehirizana anatiny 128 GB ary sarany 1,399 ringitts Maleziana (~ 303 euro). Azo alefa mialoha mialoha io, araka ny hitantsika tsara, amin'ny tranokala Oppo sy ireo fivarotana ara-batana an'ny orinasa any Malezia. Na dia tsy hatramin'ny 3 Mey aza dia mivarotra famaritana.
Famaritana sy fiasa
Ankoatry ny fanovana mifandraika amin'ny famolavolana ny F11 Pro, ny zavatra hafa rehetra, amin'ny resaka specs, dia mijanona tsy miova, araka ny efa nolazainay. Toy izany koa, mamintina indray ny toetrany isika.
Tsarovy fa ny tapaky ny volana isan-karazany manana a Fampisehoana an-tsary 6.5-inch diagonal FullHD + widescreen manome valiny 2,340 x 1,080 teboka, tahan'ny lafiny 19: 9 manify ary 90.9% ny tahan'ny efijery amin'ny vatana, izay ahazoana aina ao an-tanana, na eo aza ny habeny. Raha tokony ho notch, dia miaraka amin'ny fakantsary azo esorina izay mametraka ny sensor fakan-tsary eo anoloana, izay 16 MP ary misy vavahady f / 2.0 aperture afovoany.
Eo ambanin'ny hood dia ampiasain'ny chipset MediaTek malaza midadasika, ny Helio P70, ary manolotra ny Teknolojia Hyper Boost, izay manatsara ny fahombiazan'ny telefaona amin'ny ankapobeny mba hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa milamina kokoa.
Rehefa tonga tao amin'ny departemantan'ny fakantsary izahay dia sendra ny fanamboarana fakan-tsary roa misy a 48 MP sensor voalohany ary sensor 5 MP faharoa miaraka amin'ny flash LEDary koa miaraka amin'ny Mode Ultra Night hahazoana sary tsara kokoa amin'ny toetoetran'ny hazavana ambany sy ny asan'ny AI hafa.
Ny safidin'ny fifandraisana amin'ny fitaovana dia misy ny fanohanana Dual 4G VoLTE, dual-band 802.11 ac WiFi (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, ary port microUSB. Raha ny momba ilay rindrambaiko, ny Oppo F11 Pro Avengers Edition koa Miasa miaraka Android 9 Pie miorina amin'ny ColorOS 6. Ho fanampin'izany, izy io dia miaraka amina mpamaky rantsan-tànana any aoriana ary ampandehanin'ny bateria 4,000 mAh izay miaraka amin'ny haitao mpamaky VOOC 3.0 mpamokatra ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Avengers dia efa manana ny telefaoniny manokana, ary miaraka amin'ny Oppo F11 Pro Avengers Edition
Misimisy kokoa momba ny Redmi miaraka amin'ny Snapdragon 855: naseho ny antsipiriany
Noho io antony io dia tapaka ny efijery an'ny Galaxy Fold, araka ny filazan'ny iFixit